जर्मनीमा बाढी: क्षति, प्रकोप र मौसम परिवर्तन | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 19/07/2021 09:38 | मौसम घटनाहरू, बाढी
को जर्मनीमा बाढी तिनीहरूले आज सबै समाचार ओपारिएका छन्। र यो कम देशमा भएको प्रकोपको लागि होइन। दशकहरूमा भएको सबैभन्दा भयावह बाढी पछि कम्तिमा १२० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ र पश्चिमी यूरोपमा सयौं बढी हराइरहेका छन्। रेकर्ड वर्षाका कारण नदीहरू ओभरफ्लो भयो र त्यस क्षेत्रको विनाश भयो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई जर्मनीको बाढी र मौसम परिवर्तनका कारण हामीले भोग्ने खतराको बारेमा सबै खबरहरू बताउन लागिरहेका छौं।
1 जर्मनीमा बाढी
2 जर्मनीमा मौसम परिवर्तन र बाढी
3 कडा वर्षा
4 यसलाई रोक्न सकिन्छ?
जर्मनीमा, अब मर्नेहरूको स 100्ख्या १०० नाघेको छ, एन्जेला मार्केलले मौसम परिवर्तनको बिरूद्ध दृढ लडाईको लागि आह्वान गरे। बेल्जियममा कम्तिमा २० व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। नेदरल्याण्ड, लक्जमबर्ग र स्विजरल्याण्ड पनि प्रभावित छन्। धेरै कारणहरूले बाढीलाई योगदान पुर्‍याउँछन्, तर मौसम परिवर्तनका कारण न्यानो वातावरणले अत्यधिक वर्षाको सम्भावना बढाउँदछ।
विश्वको तापक्रम १.२ डिग्री सेल्सियसको वरिपरि तापिसकेको छ औद्योगिक युग सुरु भएदेखि र तापक्रम बढ्न जारी रहन्छ जबसम्म विश्वभरिका सरकारहरूले उत्सर्जनमा कठोर कटौती गर्दैनन्।
एक वृद्धले सहरमा प्रवेश गर्न खोज्यो जुन लगभग नष्ट भयो। उनले भने कि उनका नातिनातिनाहरू पनि त्यहाँ थिए, तर उनले तिनीहरूका आफन्तहरू फेला पार्न सकेनन्। कतिपय व्यक्ति हराइरहेका थिए भन्ने बारे यकिन छैन भनेर अधिकारीहरूले भनेका छन्। अधिकांश क्षेत्रमा कुनै टेलिफोन संकेत छैन र सञ्चार लगभग असम्भव छ। तर आजको मृत्यु हुने संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ र समयको साथ यस प्रकोपको मात्रा स्पष्ट भएको छ।
आहर नदीको छेउमा, बाढी भएका घरहरू, भत्केका पुलहरू, क्याम्प मैदानहरू, र ट्रेलर पार्कहरूको बाँकी अवशेषहरू छन्। त्यहाँ बस्ने र क्षतिलाई प्रमाणित गर्ने धेरै व्यक्तिहरूको लागि, सफा गरेर र फेरि सुरू गर्ने कल्पना गर्नु लगभग असम्भव छ। लगभग १ and,००० पुलिस, सैनिक र आपतकालीन सेवाहरू जर्मनीमा खोजी र उद्धारमा सहयोग पुर्‍याइएको छ।
बेल्जियममा, नाटकीय बाढी तस्विरले भभेरियर्सको सडकहरूमा गाडीहरू बनाएको देखाउँदछ। चोरीको जोखिमको कारण, एक रात कर्फ्यू स्थापित गरिएको छ।
लीज बेल्जियमको ब्रसेल्स र एन्ट्वर्प पछि तेस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर हो, जसलाई बिहीबार निकाल्ने आदेश दिइयो। स्थानीय अधिकारीहरु भन्छन कि जो छोड्न सक्दैनन् उनीहरु आफ्नो भवनको अग्लो तलामा जानु पर्छ। शहर हुँदै बग्ने म्यूज नदी शुक्रबार बिहान समतल भयो, केही क्षेत्रमा थोरै मात्रामा बहाव पनि भयो।
जर्मनीमा मौसम परिवर्तन र बाढी
उत्तरी यूरोपमा बाढी र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तातो गुम्बज जस्ता अत्यधिक मौसम घटनाबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएकोमा वैज्ञानिकहरूले राजनीतिज्ञहरूको निन्दा गर्छन्। धेरै वर्षदेखि, तिनीहरूले पूर्वानुमान गरेका छन् कि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मीयाम र गर्मीका छालहरू अझ तीव्र हुनेछन्। पढाइ विश्वविद्यालयको हाइड्रोलोजी प्रोफेसर हन्ना क्लोकले भने:युरोपमा बाढीको कारण हुने मृत्यु र विनाश एक दुःखद् घटना हो जसबाट बच्नुपर्दछ"। पूर्वानुमानकर्ताहरूले यस हप्ताको सुरूमा चेतावनी जारी गरे, तर चेतावनीमा अपर्याप्त ध्यान दिइयो र तयारीहरू अपर्याप्त थिए।
उत्तरी गोलार्द्धको बाँकी भागले अभूतपूर्व तातो तर and्ग र आगोको अनुभव गरिरहेको छ भन्ने तथ्यले मानिसहरूलाई याद गराउँदछ कि बढ्दो तातो संसारमा, हाम्रो हावापानी अझ खतरनाक हुन सक्छ।
वैज्ञानिकहरू भन्छन कि सरकारहरूले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउनु पर्छ जसले चरम घटनाहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र बढी चरम मौसमको लागि तयारी गर्दछ। यद्यपि सोमबार एकदमै बाढी आएको बेलायतमा सरकारको मौसम परिवर्तन सल्लाहकार समितिले हालै मन्त्रीहरूलाई भनेको छ कि चरम मौसमको लागि मुलुकको तयारी five बर्ष भन्दा पनि खराब छ। भन्यो सरकारले यसको उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धताहरूको एक पाँचौं मात्र पूरा गरेको छ।
यस हप्ता मात्र, बेलायती सरकारले मानिसहरूलाई उडान कटौती गर्न आवश्यक छैन भनेर बतायो किनभने यस प्रविधिले उत्सर्जन समस्यालाई हल गर्नेछ, र अधिकांश विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यो जुवा हो।
युरोपभरि ठूलो वर्षा चिन्ताको विषय बनेको छ। अधिकारीहरूको ध्यान अब अस्ट्रिया र दक्षिणी जर्मनीको बाभेरियाका भागहरूमा केन्द्रित छ। अस्ट्रियाका मिडियाले रिपोर्ट गरे कि साल्जबर्ग क्षेत्रमा आपतकालीन उद्धार टोलीहरूले धेरै मानिसहरूलाई घरबाट बचाउनु परेको थियो, जहाँ शहरको सडक भारी वर्षाले बाढी आएको थियो।
रोयटर्सका अनुसार अस्ट्रियाको राजधानी भियनाका अग्निशामक दम्पतीहरूले भनेका छन् कि शनिबार राति एक घण्टामा पर्ने वर्षाको मात्रा गत सात हप्ताको रेकर्ड भन्दा पर छ। बावरियामा कम्तीमा एक व्यक्ति बाढीले मरे।
यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि सबै चरम घटनाहरू हाम्रो मौसम परिवर्तनलाई दोष दिन मिल्दैन कि यसको लागि पर्याप्त प्रमाणहरू छैनन्। चरम मौसम घटनाहरू लाखौं बर्ष देखि अस्तित्वमा छ र मौसम परिवर्तन संग सम्बन्धित छैन। जे होस्, त्यहाँ एक सम्बन्ध छ ग्रहको औसत तापक्रममा वृद्धि र अत्यधिक मौसमविद् घटनाको वृद्धि जर्मनी मा बाढी जस्तै।
यसलाई रोक्न सकिन्छ?
त्यहाँ आलोचना बढेको छ कि जर्मन सरकारले बाढीपछिका घटनाहरूका बारे रिपोर्ट गर्न सार्वजनिक टेलिभिजनलगायत सबै उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गरेन। जर्मनीमा भएको गम्भीर दुर्घटना हुनुभन्दा चार दिनअघि प्रणालीले कथित रूपमा देश र बेल्जियममा अलर्ट पठाएको थियो। यद्यपि सतर्कता पठाउनको कुनै उपयोग छैन यदि मानिसहरूलाई बाढी अवस्थाहरूमा कसरी व्यवहार गर्ने भनेर थाहा छैन र तिनीहरू त्यस्तो आपतका लागि तयार छैनन्, तिनीहरूले खानेकुरा, पानी र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू भण्डारण गरिरहेका छैनन्। विज्ञहरूले भने कि जुनसुकै अवस्थामा पनि नदी खोलाको नजिकको ठाउँ र शुल्डरको शहर जस्तो बेंसीमा केही घण्टामा खाली गर्न गाह्रो छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं जर्मनीमा बाढीको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम घटनाहरू » जर्मनीमा बाढी